Eyona micimbi ijongene neefilitha ze-Eheim zamanzi, yeyiphi oyikhethayo? | Ngeentlanzi
Ukugcina umgangatho we-aquarium yethu kunye nokwenza iimeko ezifanelekileyo kuphuhliso oluqhelekileyo kunye nokugcinwa kweentlanzi zethu, kufuneka sibe nesihluzi esihle se-aquarium. Icebo lokucoca ulwelo lwe-aquarium liyimfuneko ukonyusa i-oxidation yamanzi kunye nokunciphisa ukungcoliseka kwe-aquarium ngokuqokelelwa kwenkunkuma yendalo. Enye yeempawu ezifunwa kakhulu yile Isihluzo se-Eheim.
Isihluzi se-aquarium yinto ebalulekileyo yokugcina amanzi ekwimeko entle kunye nempilo yentlanzi. Ngaba unoxanduva lokwenza jikelezisa amanzi kwitanki kwaye ucofe imichiza enetyhefu. Ngenxa yomsebenzi wentlanzi kunye nezityalo, ezi zinto zamachiza ziya kuqokelelana ekuhambeni kwexesha, ukuba sinazo kwaphela.
Isetyenziselwa ukugcina amasuntswana aqinileyo, afana neziqwenga zezityalo okanye amaqhekeza, kunye namasuntswana aqinileyo akhutshwe kwizithako ezinje ngamayeza kunye nentlanzi yokutya okutyayo. Inje ngenkqubo yendalo, njengomlambo okanye ichibi. Inkunkuma yebhayoloji ayizange iqokelele kwinqanaba eliyingozi lezityalo nezilwanyana.
Iifilitha ze-Eheim ziyinkokeli kwii-aquariums zaseYurophu. Benza iimveliso ezinokuthenjwa ngokwenyani ngaphezulu kweminyaka engama-50, ke i-aquarium yethu ikwimeko ephezulu. Isihluzi se-EHEIM aquarium sikwisikhundla esiphambili. Banikezela ngezixhobo zokucoca ulwelo oluphezulu kunye nezixhobo ezivela kwi-EHEIM, ezizizo ezifanelekileyo ekucoceni isihluzi sakho.
1 Iifilitha ze-Eheim ezilungileyo
2 Iindidi zeefilitha ze-Eheim
2.2 Isihluzo se-Eheim eXperience
2.3 U-Eheim Ecco Pro
2.4 Ingcali ye-Eheim 3
2.5 Isihluzo se-Eheim Professionel 3e
2.6 Ingcali ye-Eheim 4+
2.7 Isihluzo se-Eheim Professionel 4e +
3 Ungayikhetha njani isihluzo se-Eheim
Iifilitha ze-Eheim ezilungileyo
I-Eheim-Icebo lokucoca ngaphakathi ...
Isihluzi se-Eheim Pickup 200 ...
Iindidi zeefilitha ze-Eheim
Eheim 7006316 Filtro...
Olu hlobo lwemodeli luthembekile, kuba luvunyiwe zizigidi zamanzi kwihlabathi liphela. Zilungele zombini iintlanzi zamanzi angenasawoti kunye neentlanzi zamanzi anetyuwa kwaye zixabisa ixabiso lemali. Uncedo olunalo kukuba ithi cwaka kwaye ayinakuvelisa umbane. Inokusebenziseka ngokulula kwaye ikhuselekile ngenxa yokuvalwa kwayo ngenxa yesilumkiso sayo.
Olunye uncedo esinokulubona kule modeli kukuba kulula ukuyicoca, ke oko kuya kusinceda sinciphise imisebenzi yolondolozo. Inokuxhotyiswa ngeziponji zokucoca ulwelo kwaye yongeze ezinye iintlobo zezinto zokunyusa ukusebenza kwayo.
Isihluzo se-Eheim eXperience
Amava e-Eheim 250 ...
Esi sisihluzo sokuqala ngesikwere sobuhle esenziwe ngu-Eheim. Impumelelo yayo ibonakalisiwe ukusungulwa kwayo, uninzi lweefilitha zangaphandle ze-Eheim ziye zahlengahlengiswa ukuze zisebenzise i-aesthetics efanayo. Isizathu kukuba imilo yesikwere igcina indawo, icebo lokucoca ulwelo oluzinzileyo, kwaye ibonelela ngesixa esikhulu sokucoca.
I-Eheim eXperience ine-adapter yombhobho eyakhelwe-ngaphakathi ukuze isebenze ngokulula. Ukuxhotyiswa ngenkqubo yokubamba esebenzayo, iibhasikithi zokucoca ulwelo zinokudibaniswa zodwa ngaphandle kokutsala umdla kuba ziyasongwa zayanyaniswa nefanitshala. Enkosi kumalungu ayo e-ceramic, ingxolo eveliswe sisihluzo sangaphandle ayisongxaki.
U-Eheim Ecco Pro
Isihluzo se-Eheim se ...
Le modeli inokusetyenziswa kwamandla asezantsi kunye nokusebenza okuphezulu xa uyisebenzisa. Oku kuyakusinceda ukunciphisa ukusetyenziswa kombane kwi-aquarium yethu. Inesiphatho esinemisebenzi emininzi esinceda ukuyibeka ngcono. Yintoni egqithisile, kuthe cwaka kwaye kune-shaft ethwele izixhobo ezenziwe ngezinto ze-ceramic. Ineebhasikithi ezakhelwe-ngaphakathi zokucoca ezilawulwa ngokukodwa kwaye zivumela ukonyusa ukusebenza kwazo zombini iifilitha zomatshini, zebhayoloji kunye neekhemikhali. Zonke iingobozi sele zixhotyisiwe ukuze ubeke kwaye uqalise i-aquarium.
Ingcali ye-Eheim 3
Ingcali ye-Eheim 5E ...
Le modeli yenzelwe abona bantu bathanda i-aquarium. Bakwasebenza kunye nee-aquariums ezinkulu. Kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe iilitha ezingama-400 ukuya kwali-1200 zamanzi. Zimbini iinguqulelo zecebo lokucoca ulwelo, enye yeyona iqhelekileyo kwaye enye iluhlobo "T" (Thermofilter) enesifudumezi esakhelwe ngaphakathi.
Ubunzima beli cebo kukuba bunokulawulwa ngombane kwaye bulawulwe kwikhompyuter. Ngokwendlela yoyilo, inoyilo lwesikwere oluvumela ukuba ilawule umthamo omkhulu wokucoca. Inokuzinza okuhle kwaye ayidli mandla. Uncedo olunikezayo ngaphezulu kwamanye amaziko kukuba inokuhamba kwamanzi okuhlengahlengiswa ngokupheleleyo. Kuthe cwaka ngokusetyenziswa kuba inenqaba ethwele izinto ezenziwe ngodongwe. Idityaniswe neebhasikithi zeefilitha ezisuswe ngokulula ngokwahlukeneyo.
Ukongeza, iza neadaptha yethumbu kathathu eneendawo zokungena ezimbini kunye nendawo enye ukuze Ukujikeleza kwamanzi okugqibeleleyo kwi-aquarium. Inamavili ezothutho.
Isihluzo se-Eheim Professionel 3e
Umahluko omkhulu phakathi kochungechunge lobungcali kunye ne-3e yobuchwephesha kukuba le yokugqibela iza ngokusemgangathweni ngolawulo lwe-elektroniki olunemisebenzi emininzi, njengokujonga ngokuqhubekayo kunye nohlengahlengiso olulula lwemisebenzi yokuhluza, konke oku kunokwenziwa kwikhompyuter yasekhaya. Oku kungenxa yesoftware ye-EHEIM ControlCenter. Ngamaqhosha amathathu nje, unokuhlengahlengisa yonke imisebenzi yokuhamba, ukuhamba, amandla empompo, kunye nokubeka esweni inkqubo ngokuqhubekayo.
Inemisebenzi ye-elektroniki esebenza ukulawula ukuhamba kwamanzi ngokuzenzekelayo. Enye yezinto ezintsha ngokunxulumene nezinye iimodeli kukuba inesilumkiso malunga nenqanaba lokungcola kwezinto zokucoca ulwelo. Ke ngoko, xa isihluzo singcolile ngokwaneleyo siyakukulumkisa.
Ingcali ye-Eheim 4+
U-Eheim 2616802 ...
Kuphuculo oluqhubekayo lwezihluzi ze-EHEIM, Uthotho lwepro 4+ luphuculwe ngaphezulu kwePro 3 yangaphambili.
Enkosi ku "Xtender", eyona nto iphambili kule nguqulo kukuba ingabandisa ubomi bezixhobo zokucoca ulwelo. Le yinkqubo yongxamiseko elumkisa xa isihluzo siba mdaka kwaye ukuhamba kwamanzi kuncipha. Eli qhina lokujikeleza livumela uhlengahlengiso ukuze sibe neentsuku ezimbalwa ngaphambi kokucoca izinto zokucoca ulwelo. Njengoko inxenye yokuhamba kwamanzi iphambukisiwe, inkqubo igcina ukuhluza kwebhayiloji kumanzi.
Njengazo zonke iinguqulelo zobungcali, kolu luhlu sifumana uhlobo "T" lokucoca ulwelo ngesifudumezi sobushushu, esibuyisela amanzi acociweyo kwi-aquarium kubushushu obuchanekileyo.
Isihluzo se-Eheim Professionel 4e +
Eyona nto intle ye-Aquatics Eheim ...
Okwangoku inye kuphela imodeli yeefilitha zangaphandle kuthotho lwe-EHEIM Professional 4e +. Ezi zihluzo ziyafana ngokusisiseko njengezihluzo ze-3e zobungcali, kodwa ngokhetho lweXtender, oluthi ikuvumela ukuba uhlehlise ukucoca kunye nokutshintsha izixhobo zokucoca ulwelo.
Ungayikhetha njani isihluzo se-Eheim
Ukukhetha isihluzo se-EHEIM sokugcina iintlanzi, kunye noluhlu olubanzi lwamathuba, kufanele kube lula. Nangona kunjalo, ayisiyiyo. Into yokuqala ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ukhetha olu hlobo lwecebo lokucoca ubungakanani be-aquarium.. Kuxhomekeke kubungakanani kunye nenani lamanzi lokucoca ulwelo, kuya kufuneka ukhethe enye okanye enye imodeli kolu luhlu.
Eziphezulu-ziphezulu zinendawo yokuhluza ephezulu kwaye zivelisa ingxolo encinci, kwaye uninzi lwazo luxhotyiswe ngezinto eziyimfuneko zokucoca ulwelo ukuze uzibeke kwangoko emva kokufumana isihluzo. Zonke ezi zinto ziluncedo. Zingabiza kakhulu, kodwa zingcono, ngezixhobo ezizinzileyo, ziya kusinika inkonzo ebhetele.
Ngokusengqiqweni, ixabiso linokuthatha isigqibo, kodwa kwezi zihluzo uya kufumanisa ukuba uluhlu lwamaxabiso lubanzi kakhulu. Ukusuka malunga nama-euro angama-50 unecebo lokucoca ulwelo, Nangona ixabiso lesicoci elinexabiso eliphantsi liza kuchaphazeleka bubungakanani be-aquarium.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nefilitha ye-Eheim kunye neempawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Isihluzo se-Eheim